ယူကျုး - သင်၏အေဂျင်စီ (သို့) ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူအားသင်၏ရုပ်သံလိုင်းသို့သုံးစွဲသူလက်လှမ်းမီစေရန်မည်သို့ပံ့ပိုးပေးမည်နည်း Martech Zone
အခုတစ်ဖန်အေဂျင်စီမှထွက်ခွာပြီးကျွန်ုပ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေသောစီးပွားရေးတစ်ခုနှင့်အလုပ်လုပ်နေပါသည် သူတို့ရဲ့ YouTube တည်ရှိမှုကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ…တဖန်၊ သူတို့နှင့်အလုပ်လုပ်သောအေဂျင်စီသည်သူတို့၏အကောင့်အားလုံးပိုင်ဆိုင်သည်။ ငါအခုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ဒါကိုလုပ်နေတဲ့အေဂျင်စီတွေအကြောင်းငါညည်းညူပြီးဒီအလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဖို့အကြံပေးတယ်။ မည်သည့်အကောင့်ကိုမဆိုစီမံခန့်ခွဲရန် ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်စကားဝှက်ကိုသုံးခွင့်မပေးသင့်ပါ။
မည်သည့်အေဂျင်စီအလုပ်ကိုမဆိုလုပ်ရန်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းမှာသင်၏အဖွဲ့အစည်းကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်သူများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအဓိကပလက်ဖောင်းအားလုံး၏စီးပွားရေးအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ မန်နေဂျာလက်လှမ်းမှီ ဒါပေမယ့်ငွေတောင်းခံလွှာနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုဘယ်တော့မှမရယူပါနဲ့။ သင်မလုပ်ပါကအေဂျင်စီနှင့်သင်ပြုတ်ကျသွားနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းအမြဲရှိပြီးသင်၏နောက်အေဂျင်စီအတွက်ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိရန်ခက်ခဲသည်။ ပိုဆိုးတာကမင်းနဲ့တွဲလုပ်နေတဲ့အေဂျင်စီ (သို့) အတိုင်ပင်ခံကစီးပွားရေးပြတ်သွားရင်ဒါမှမဟုတ်မင်းလိုအပ်တဲ့အခါမရရှိနိုင်ဘူး။ ဤကဲ့သို့သောသင်၏လုပ်ငန်းကိုမစွန့်စားပါနှင့်။
ဒီနေ့ငါမင်းရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့မန်နေဂျာအဖြစ်သူတို့ကိုမင်းရဲ့ YouTube Channel မှာမင်းအေဂျင်စီ (သို့) ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးသူကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးပုံကိုမင်းကိုငါလမ်းပြပေးမယ်။
YouTube ပေါ်မှာ Manager တစ်ခုထည့်သွင်းနည်း
ဂူဂဲလ်သည်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးတွင်သင်အမှတ်တံဆိပ်အကောင့်တစ်ခုရှိနိုင်ပြီး၎င်းကိုသုံးစွဲသူများအားအကန့်အသတ်ဖြင့်သာအသုံးပြုခွင့်ပေးသည့် interfaces နှင့် options များကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းရဲ့အားသာချက်ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။
သင်မပေးဘူး အရေးကြီးသော logins နှင့် password များ သူတို့ကိုလုံခြုံအောင်ထားရန်သင်၏အေဂျင်စီကိုအားကိုးပါ။
မင်းဘယ်တုန်းကမှ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေး မင်းအေဂျင်စီကိုထွက်သွားရင်မင်းထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်ပြသနာမရှိဘူး။ သင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်း login လုပ်ပြီးသူတို့ရဲ့ access ကို manager တစ်ယောက်အနေနဲ့ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့အေဂျင်စီရှိပါတယ် အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကန့်သတ် access ကိုအသုံးပြုသူများအားစီမံခန့်ခွဲခြင်း (သို့) ပိုင်ဆိုင်မှုကဲ့သို့ဘယ်သောအခါမျှမ ၀ င်သင့်ပါ။
သင်၏ YouTube Channel ကိုစီမံရန်အေဂျင်စီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူထည့်ရန်အဆင့်များ
ဖွင့်လှစ် YouTube ကိုစတူဒီယို ဘယ်ဖက် menu ၏အောက်ခြေရှိ settings ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရွေးချယ်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ မီနူးကိုနှိပ်ပါ ခွင့်ပြုချက်များစီမံခန့်ခွဲရန်။ သင်၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဂူဂဲလ်မှအတည်ပြုရန်သင်ဒီမှာသင်၏အကောင့်သို့ဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
အခုမင်းကမင်းအတွက်ဘဲ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အကောင့်အသေးစိတ် ရွေးချယ်နိုင်သည် ခွင့်ပြုချက်များကိုစီမံသည် သင်၏အသုံးပြုသူများအတွက်။
အပေါ်ညာဘက်ထောင့်ရှိ icon ကိုနှိပ်ပါ အသုံးပြုသူများကိုဖိတ်ပါ.
အသုံးပြုသူအသစ်ထည့်ပါ ယခုသင့်အားအီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုနှင့်သင်၏အကောင့်အတွက်သူတို့၏အခန်းကဏ္addကိုထည့်သွင်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အေဂျင်စီတစ်ခုသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူအတွက်ကျွန်ုပ်ထောက်ခံချက်မှာသူတို့ကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည် မန်နေဂျာ.
ဒါပဲ…အခုဆိုရင်မင်းရဲ့ user ကသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္acceptကိုလက်ခံပြီးမင်းရဲ့ YouTube Channel ကိုစတင်စီမံနိုင်မယ့်အီးမေးလ်အကြောင်းကြားစာတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မယ်။
Tags: youtube ကိုရန်မန်နေဂျာထည့်ပါအမှတ်တံဆိပ်အကောင့်ဂူဂဲလ်အမှတ်တံဆိပ်အကောင့်ဘယ္လိုyoutube မှာခွင့်ပြုချက်ကိုစီမံခန့်ခွဲyoutube ကYouTube အမှတ်တံဆိပ်အကောင့်ယူကျု့ချန်နယ်ယူကျုချန်နယ်မန်နေဂျာyoutube စျေးကွက်ရှာဖွေရေးYouTube ခွင့်ပြုချက်များYouTube အသုံးပြုသူYouTube သုံးစွဲသူခွင့်ပြုချက်